‘बिपी कोइरालाको आर्थिक विचार’ पुस्तक सार्वजनिक – BRTNepal
बिआरटीनेपाल २०७८ मंसिर २२ गते ७:०४ मा प्रकाशित
पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले लेख्नुभएको पुस्तक ‘बिपी कोइरालाको आर्थिक विचार’ सार्वजनिक भएको छ । डा. नेपालले पुस्तकमा आफूलाई बिपीले भनेका आर्थिक उन्नति, आर्थिक सोच र विचार पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रममा उद्योगपति तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले आफ्नै खुट्टामा उभिनसक्ने राजनीतिक कार्यकर्ता नभएसम्म सही नेता नजन्मिने बताउनुभयो । उहाँले पुस्तकमा भनेका बिपी आदर्श अहिले पनि उत्तिकै समय सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो । सांसद चौधरीले राजनीति पेशा नभइ सेवा गर्ने माध्यम हो भन्ने बिपीको भनाइ सबैले अनुशरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।